Ụbọchị My Pet » 6 Mere Ezi Ahụ Ike Bụ Ezi N'ihi Relationships
Ralph Waldo Emerson ozugbo kwuru, "Health bụ kasị ukwuu akụ."
Olee otú ezi.
Ma n'ụzọ dị mwute, dị nnọọ ọtụtụ n'ime anyị na-na-arụ ọrụ na a "mpe."
Na ghar ke na kọmputa na ndị ọzọ sedentary lifestyles; ịṅụbiga ụlọ nri ngwa ngwa n'ihi na gbalụ gbalụ schedules; ma ọ bụ nanị a enweghị mmata banyere ike omume.
Tụlee ọnụ ọgụgụ:
Dị ka CNN.COM, ibu n'etiti ndị toworo eto na America amụbawo okpukpu abụọ n'etiti 1990 na 2010.
Kwa Afọ nlekọta akwụ ụgwọ nke ibu oké ibu gafere $140 ijeri.
The Center maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na-akọ na ise siga na-akpata ihe karịrị 480,000 ọnwụ kwa afọ na U.S.
Ise siga bụ na-eduga na akaghi aka na-akpata ọnwụ.
Ịbụ ibu na obese pụrụ ịbụ ihe ize ndụ ihe na-emepe emepe ụfọdụ ọrịa na ọrịa ndị dị ka: ọrịa obi na ọrịa, Ụdị 2 -arịa ọrịa shuga, ụfọdụ ọrịa cancer na ọbara mgbali elu.
Ma, e nwere ozi ọma. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ọ bụghị mgbe nile ịchịkwa ketara eketa, akara aka, ma ọ bụ onye mmekọrita maka chocolate, e nwere ụfọdụ n'ọrụ ihe anyi nwere ike na-ewe iji na-enye ahụ ike ka mma.
HERE mere anyị kwesịrị...
1. Ezi ahụ ike na-enye ohere anyị na-enweta ezi mmekọrịta. The mma anyị na-eche, mma anyị ọnọdụ uche, (a na-), nke na-eme anyị obi ụtọ karị na-na na-emekọ na. Ò nwetụla mgbe ị na na onye nsinsi ọdọhọde banyere mgbu? Ma ọ bụ ndị snaps na gị n'ihi na ha na-mgbe na-agbakasị? Ọ nwere ike maa tinye a damper na fun akpata.
2. Ezi ahụ ike na-eme ka mma ume, ike, na vitality. Ọ na-ekwe ka anyị na-ekere òkè ahụ omume na-enweghị ihe mgbochi na-agaghị emeli.
3. Ezi ahụ ike na-enye ohere ka anyị na-onwe, na-anaghị achọ ndị ọzọ (ma ọ bụ mpụga ihe) inye anyị kwa ụbọchị na-elekọta; ọ na-egosi nchebara echiche ndị anyị na-eche banyere.
4. Ezi ahụ ike na-enye ukwuu Ekliziastis na a mma nke ndụ.
5. Ezi ahụ ike na-azọpụta ego. Nke ahụ dị mma. Ọ nwere ike na-egbochi ọnụ ọgwụ, na-efu nke mgbe nile dọkịta nleta, na elu mkpuchi premiums.
6. Ezi ahụ ike enhances anya. Tụlee nwa agbọghọ na egbuke akpụkpọ, na stud na isii mkpọ, na ndị na sleek ọgụgụ na-ekwe ka ha anya dị egwu ọ bụla uwe ha na-eyi. "Mgbe ị na anya ọma, ị na-eche ihe ọma. "
N'iburu nke a n'uche, ebe a bụ ole na ole dị mfe, ngwa ngwa Atụmatụ, n'ihi na ogologo na-adịgide adịgide mmetụta na ezigbo ahụ ike.
Were obere nzọụkwụ. Dị ka ọtụtụ ihe ndị ọzọ ná ndụ, a gradual obibia bụ mma. Malite site na-ewe ihe na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kwa ụbọchị, na-eri nri na imeru ihe n'ókè.
Ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga, ịkwụsị.
Na-adịghị amasị mmega? Tụlee ọzọ. Dị ka ọmụmaatụ, M n'anya na-ete egwú. Ị maara na-agba egwú bụkwa a fun ụzọ ọkụ calories na-anọ udi? Tụlee ewere a Zumba klas nọ n'ógbè gị. Ma ọ bụ ikekwe Bowling ma ọ bụ igwu mmiri ga-abụ ndị ọzọ gị chọọ. Ihe dị mma karịa ihe ọ bụla.
Aṅụ ihe mmiri. Ọ dị mma n'ihi na anụ ahụ ọ na-flushes si adịghị.
Get izu ike. Ọkachamara nwere ike ikwu banyere awa asatọ nightly.
Nwere a Pita. Health ọmụmụ na-egosi na inwe otu na-enye dị iche iche ike uru ma na-enye echiche nke ibe.
The onyinye kasịnụ ị pụrụ inye onwe gị na onye gị na bụ ezi ahụ ike– echiche, mmetụta uche na n'ụzọ anụ ahụ.
Cheta: Ozi a abụghị iji rụchitere ndụmọdụ ahụike gị anya ahụike ọkachamara. Ịkpọtụrụ dọkịta gị ebe na ọdabara.